Kāne'ohe Bay O'ahu, vatomamy vatokely manjary vokatry ny alga Echeuma denticulatum. Sary © Jen Smith
Algae dia vondrona samihafa amin'ny ankapobeny autotrophic organisms Izany dia avy amin'ny unicellular (ny sasany ny fitombôltonona) amin'ny endriny marobe (ohatra alge). Ny ankamaroan'ny algô dia photosynthetic, toy ny zavamaniry terestrialy, fa tsy heverina ho zavamaniry satria ny vatany dia tsy voalamina amin'ny taova tsy hita ao amin'ny zavamaniry.
Nisy fiaramanidina an-dranomasina an-dranomasina tonga nanerana izao tontolo izao noho ny famotsorana tsy am-pisalasalana na fampidirana ny atody. Ny ankamaroan'ny algoma izay nampidirina dia tsy lasa mitongilana, fa ireo izay manao dia mety hiteraka fiantraikany goavana amin'ny tontolo iainana an-dranomasina.
Ny lalambe dia:
Ny fifamoivoizana amin'ny sambo, toy ny blasfemia sy ny fanimbana
Ny fitrandrahana akoholam-boankazo (fiompiana akorandriaka dia tompon'andraikitra amin'ny fiparitahan'ny karazan-javamaniry an-dranomasina amin'ny alàlan'ny fitateram-be eran-tany amin'ny onjam-pokontany oyster na sokatra hafa ho an'ny fanjifana)
Fiaramanidina fisakafoanana sy fitaovana SCUBA (amin'ny alalan'ny fitaterana rehefa mihetsiketsika avy any amin'ny toerana mankany amin'ny toerana)
Fialokalofana azo avy amin'ny rano amin'ny alalan'ny fantsom-panafody na fanafahana amin'ny fikasana
Ny fanararaotana ny alga, Gracilaria salicornia, sarobidy be loatra (Montipora capitata) ao Kāne'ohe Bay, O'ahu. Sary © Eric Conklin
Ny fantsom-pitondrana milomano mitonona dia ahitana mpikambana amin'ireto vondrona manaraka ireto: Chlorophyta (alga maitso), Phaeophyta (ala mena), ary Rhodophyta (ala mena). Ny karazana maripana an-dranomasina roa dia voatahiry ao amin'ny lisitry ny vondrona IUCN Invasive Species Specialist an'ny mpanani-bohitra 100 ratsy indrindra eran'izao tontolo izao: ny ala maitso Caulerpa taxifolia ary ny ala mena Undaria pinnatifida. Algae tropical invasive Gracilaria salicornia, Hypnea musciformis, Acanthophora spicifera ary Eucheuma denticulatum. Gracilaria salicornia ary Eucheuma denticulatum dia nanjary nihanaka tamin'ny vatoharan-dranon'i Hawaii.
Havia: Lehibe Montipora capitata tampon'ny harambato eny amin'ny harambato ao Kāne'ohe Bay, i O'ahu dia voakorontana noho ny alga, Gracilaria salicornia. Ara-drariny: Ny lohan-doha mitovy amin'ny algôma dia nesorina, nampiseho ny maty sy voatsindry mafy teo ambanin'ny fitohizan'ny alga. Sary © Eric Conklin
Ny fiantraikany ara-tontolo iainana amin'ny algan'ny alàlan'ny ranomasina dia ahitana ny fiovan'ny rafitry ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny fiaraha-monin'ny tafika ary mampihena ny habetsahana, ny fahasamihafana, ny fahandroana, ny fahombiazana ary ny asan'ny karazana teratany. Ny alg amin'ny famandrihana dia afaka manafika haingana ary mandray ny toeram-ponenan'ny vatohara. Afaka mamotaka sy mamono ny haran-dranomasina izy ireo amin'ny alàlan'ny fambolena, ny fialana ary ny fibobohan-toaka, ary mety hiteraka fihenam-bidy sy fihenam-bidy.
Ny fatran'ny algan'ny alàlan'ny ranomasina dia mety hiteraka vokatra ara-tsosialy mivantana. Ny alahelon'ny alika dia mety tsy mahafinaritra ho an'ny mpizahatany ary misy fiantraikany ratsy amin'ny hetsika fialantsasatra toy ny SCUBA manondraka sy snorkeling. Ny fandaniana goavana dia mety ho tafiditra amin'ny fanesorana alga ihany koa. Ohatra, ny ala mena, Hypnea musciformis, dia nampidirina tany Hawaii ho an'ny toekarena ary niely tany amin'ny Nosy Hawaiiana nandritra ny taona maromaro ary namorona voninkazo maro be. Nampiroborobo ny loto amoron-dranomasina ny voninkazo ary nahatonga fitomboan'ny biomass algal izay nipoitra teny amoron-dranomasina ary namorona fofona sy tontolo iainana mahatsiravina. Fianarana iray ref Tombatombana fa Maui dia mitentina $ 20 tapitrisa isan-taona mba hitantanana ny fiantraikan'ny felam-boninkazo (amin'ny toeran'ny tora-pasika, ny sanda ara-barotra, ary ny fihenan'ny lanjany amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fonenana).
Museum des évêque ary ny University of Hawaii: Torolalana amin'ny fampidirana ireo karazana an-dranomasina any Hawaii
Tetik'asa iraisam-pirenena momba ny fiompiana trondro an-dranomasina marobe - Ny gaboraraka manerantany momba ny karazan-javamaniry amandavodin'ny 330, anisan'izany ny famoahana tsy ara-boajanahary amin'ny alàlan'ny fiompiana ranomasina, ny lalan-drivotra, ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana, ary ny loza hafa.
ICRI - karazam-borona manavakavaka
IUCN - Vondron'olona Specialist Group
USDA - Fandrafetana karazan-tsakafo manontolon'ny karazan-javakanto sy ny jeôgrafia
IUCN - Menin-dranomasina - Karazam-borona mampidi-doza any amin'ny Tontolo Maripana an-dranomasina
NCCOS - Karazan-tsakafo
University of Hawaii ao amin'ny Department of Botanical Manoa and Museum of Eviction - Algae Marine Invasion of Hawaii